musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Expedia Inoona Inoshamisa Kukura kweJamaica
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Jamaica uye Expedia musangano
Vatungamiriri vakuru paExppedia Inc., inzvimbo huru yekufambisa pamhepo pasi rose uye mugadziri mukuru webhizinesi rekushanya kuJamaica, vakavimbisa Gurukota rezveKushanya, Hon. Edmund Bartlett, uye vamwe vakuru vakuru kuti "dhata ravo rinoratidza pachena kunakidza kwemakamuri husiku uye kukura kwevatakurwi nematriki ese ari maviri kupfuura nguva imwechete mu2019." Ivo zvakare vakaona kuti United States yeAmerica inoramba iri iyo yepamusoro yepamusoro yekutsvaga musika wekutanga weJamaica.
Iyo yakanyanya kuvanzika dhata analytics mharidzo yakaitirwa kuExppedia Inc.hofisi yemubatanidzwa muMiami, Florida, nezuro, Muvhuro, Gunyana 27, 2021.
Nepo paine zvinetswa zvine chekuita neCOPVID-19, kuvimba kwevakakosha vezvekushanya muUS kuti kukura muJamaica kunoramba kwakasimba.
Jamaica inoenderera mberi nekusimbisa kuchengetedzeka kweResilient Corridors.
Nhau dzinotambirwa dzinouya kunyangwe zvichinonoka kushanya kwepasirese kudiwa kwakakonzerwa nekupararira kweiyo Delta musiyano we COVID-19 nenyaya dzakabatana. Iko kunonoka kwakakanganisa zvakashata Chikamu chekushanya cheJamaica, zvakadaro, pane chivimbo chiri kukura chekuti mamiriro ezvinhu anozoshanduka kuita nani munguva pfupi.
Bartlett akati: “Kusvika pari zvino kubatana kwedu nevatambi vanokosha mukushanya muUnited States kwave kwakanaka. Iko kune COVID-19 zvinetswa zvine hukama, zvisinei, kuvimba mukukura kwe Jamaica inoramba yakasimba kwazvo. Ticharamba tichisiya chero chinhu chichiitika netsaona nekusimbisa kuchengetedzeka kweResilient Corridors, kuvandudza kwedu uye nzira pamusoro pemiyero yevhavhosi yeECVID-19 mudunhu rese rekushanya uye chokwadi chiri nyore chekuti Jamaica ndiyo nzvimbo yakanakisa yekuenda kuzororo muCaribbean. "
Iyo yakanyanya yakavanzika dhata analytics mharidzo yakaitirwa kuExppedia Inc.hofisi yemubatanidzwa muMiami, Florida neMuvhuro, Gunyana 27, 2021. Bartlett akabatanidzwa nasachigaro weJamaica Tourist Board, John Lynch; Director we Tourism, Donovan White; Senior Strategist mubazi rezveKushanya, Delano Seiveright uye Mutevedzeri Director weKushanya kuAmerica, Donnie Dawson. Iyo Expedia kubatanidzwa ndeimwe mumatanho emisangano nevatungamiriri vanoverengeka veindasitiri yekufamba, kusanganisira makuru maAirines, Cruise Lines uye maInvestors, pamisika mikuru yeJamaica, United States neCanada. Izvi zviri kuitirwa kuwedzera vanosvika kune kwavanoenda mumasvondo nemwedzi iri kuuya, zvakare, kukurudzira kumwe kudyara munzvimbo yekushanya yemuno.
Expedia Inc. zvakare ndiyo yechitatu kambani huru yekufamba muUS, uye yechina kambani yakakura yekufamba pasirese. Mawebhusaiti ayo, ayo anonyanya kufambisa ma aggregator uye enjini dzekufambisa metasearch, anosanganisira Expedia.com, Vrbo (yaimbova HomeAway), Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, trivago uye CarRentals.com.